Forex Basics Articles | FXCC
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - Forex Basics
Forex Basics Articles Tsvaga kumusika weExx uye zvinhu zvinokosha zvingakubatsira iwe kunzwisisa nheyo dzekutengeserana. Nyaya dzose dzakapiwa dziri pano kuti dzikubatsire kusimbisa ruzivo rwako uye kuwedzera kukuziva kwako kwehuwandu hwemabhizimusi.
With so many pairs to choose from, how can you pick the best forex pairs to trade?
Well, this is what we are going to find out in this guide.
We’ll break down different types of currency pairs, and which of them can soar your profits.
Saka, ngatitangei kutanga!
Ndeapi akanakisa Ekutengesa Mapuratifomu?
Kufungisisa kuti ndeipi yakanakisa forex yekutengesa chikuva?
Fungidzira kwete zvimwe, senge iri gwara; isu tichaenda kukuudza akanakisa forex mapuratifomu uye ndeipi iwe yaunofanira kusarudza kune ako ekutengesa emabhizimusi.
Mashandisiro ekushandisa MetaTrader 4?
Kana iri nguva yako yekutanga kushandisa iyo MT4 chikuva, iyo yakawanda nhamba yematebhu, windows, uye mabhatani anogona kutyisa.
Asi usazvidya moyo, sezvo, mugwara iri, tichaenda kupaza mashandisiro aungaita MetaTrader 4 uye nemabatiro aungaita maitiro ayo.
Yakanakisa Nguva yekutengesa Forex
Vazhinji vatsva vanopinda mumusika we forex. Ivo vanochengeta ziso pane akasiyana makarenda ehupfumi uye vanotengesa zvakanyanya pane yega data yekuvandudza, vachiona musika wepamberi, unovhurwa maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva mashanu pasvondo, senzvimbo iri nyore yekutengesa zuva rese.
Iyi nzira haigone kungobvisa zvirinyore zvigadzirwa zvevatengesi, asi inogona zvakare kupisa kunyangwe mutengesi anoramba aripo.
Chii chinonzi Scalping mu Forex?
Kana iwe uchangotanga kutengesa forex, iwe ungangodaro wakawana izwi rekuti "Scalping." Muchirongwa ichi, tichaenda kunokurukura chii chiri scalping mu forex uye nei zvichireva kuve scalper.
Scalping ishoko rinoreva maitiro ekutsvaira purofiti diki zuva nezuva nekupinda nekubuda munzvimbo dzakawanda pazuva.
Chii chinonzi Chiito Chekuita mu Forex?
Pamwe, iwe wakambonzwa izwi rekuti "mutengo wechiito" mune rako rezuva nezuva rekutengesa basa, asi kune vamwe, rinogona kunge rakafanana nekugadzirisa yakaoma algebraic equations. Usapopotedzana; sezvazviri mugwaro iri, isu tichaenda kunonongedza pane chiri mutengo chiito mu forex. Saka, kana iwe uri wekutanga, iwe uchawana ichi chinongedzo chinonakidza.
Kana iwe uchifarira mune forex uye kuverenga analytical uye zvinyorwa venhau, iwe unogona kunge wakaona iyo term point kana pombi. Izvi zvinodaro nekuti pipi ndeyakajairika mukutengeserana kwe forex. Asi chii chiri pipi uye pini mu Forex?
Munyaya ino, tichapindura mubvunzo weipi iri pipi mumusika we forex uye kuti pfungwa iyi inoshandiswa sei mukutengesa Forex. Saka, ingoverenga ichi chinyorwa kuti uone kuti chii chinonzi pips mune forex.
Kupararira ndiyo imwe yemashoko anoshandiswa zvakanyanya munyika ye Forex Trading. Tsanangudzo yepfungwa iri nyore. Tine maviri mutengo mune jozi yemari. Imwe yacho Bhiza mutengo uye imwe yacho Kumbira mutengo. Kupararira ndiko kusiyana pakati peBhuru (mutengo wekutengesa) neMubvunze (mutengo wekutenga).
Nepfungwa yebhizinesi yekuona, broker vanofanirwa kuita mari vachipesana nemasevhisi avo.
Munyika yekutengeserana ye Forex, iwe unofanira kudzidza machati kutanga usati watanga kutengesa. Iyo ndiyo hwaro hweinoshandiswa zvakanyanya kuchinjanisa mitengo uye kuongororwa kwemamiriro ekunze uye ndosaka iri chishandiso chakakosha kumutengesi. Pane iyo Forex chati, iwe uchaona mutsauko wemari yemari uye yavo yekuchinjana manhamba uye nemitengo iripo mutengo unochinja nenguva. Mitengo iyi inotangira kuPDP / JPY (maBritain mapaundi kusvika kuJapan yen) kuenda kuEUR / USD (maEuro kuenda kuUS dollar) nemamwe mapara emari aunogona kuona.